23 April – Maalinta Caalamiga ee Afka Ingiriiska. | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka April 23, 2017	0 314 Views
Muqdisho (Himilonews) – 23 April waa maalin ay hey’ada QM u qaabilsan dhaqanka, seyniska iyo wax-barashada u aqoonsatay Maalinta Caalamiga ee Afka Ingriiska sanadkii 2010 si loogu dabaal-dego afka Ingiriiska iyo kaalinta uu dunida kaga jiro.
Soomaaliya, in kasta oo aysan luqadda koobaad iyo tan labaad aheyn afka Ingiriis, hadana bulshadeennu waxay kamid tahay umadaha aadka u adeegsada.
Xogaha laga diiwaan-geliyo afka Ingiriiska, kasokow ku hadalkiisa, waa in sanad kasta ku dhawaad kun erey ay kusoo kordhaan. Sida la tilmaamo waxaa jira 12 malyuun oo ah barayaal ama macalimiin dadka bara luqadda Ingiriiska dunida oo dhan. Waxaana lagu naaneysaa luqadda daruuraha waayo waxaa adeegsada duuliyaasha diyaaradaha iyo duullimaadyada caalamiga ah.
Previous: 23 April – Maalinta Caalamiga ee Buugga iyo Xuquuqda Lahaanshaha
Next: Lakulan: Ninka ay 36 sano ku qaadatay sameynta kanaal-biyood dhex maraya saddex buurood.
Haweeney musqul ku dhex-taal maktabad ku xayirneyd muddo laba maalmood ah!!